Fotoana famakiana: 4 minitra Ny toetran'ny tany sy eropeana any Europe no nanome aingam-panahy ny angano. Ny tany midadasika dia fonenan'ny dia an-tongotra an-tongotra mahavariana izay mitarika amin'ny zava-mahatalanjona sasany eto an-tany. Ireo zohy hita any Hongria, Ranomasina Grand Canyon misy rano turquoise any Frantsa, lapa-lapa any Aotrisy, ary…
Fotoana famakiana: 5 minitra Ny fitsangatsanganana lamasinina no fomba mahazatra fahita indrindra any Europe. Ary noho izany, ny sasany amin'ireo fiaran-dalamby mampihomehy indrindra eto ambonin'ny tany dia any Eropa ary indraindray, eto amin'izao tontolo izao. Na eo aza ny hoe be olona amin'ny ora tendrony, ny ambony 5 busiest train stations in Europe are…